Jowhar.com : Somali Leader News - News: Kaxda oo loo diiday ka mid ahaanshaha degmooyinka Gobolka Banaadir (Warbixin)
April 24 2014 09:52:52
Kaxda oo loo diiday ka mid ahaanshaha degmooyinka Gobolka Banaadir (Warbixin)
Warar maalmihii la soo dhaafay si aad ah u soo xoogeysanayay ayaa sheegayay in dowladda Soomaaliya ay diiday inay degmo u aqoonsato deegaanka Kaxda oo ku taal dhinaca koofureed magaalada Muqdisho.
Deegaanka Kaxda ayaa waxaa degmo u aqoosaday sanadkii 2012-dii Madaxweynihii dowladii KMG ahaa Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Warkan ayaa soo shaac baxay kadib markii Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) oo shir la lahaa Gudoomiyeyaasha degmooyinka Gobolka Banaadir uu shirka ka saaray Gudoomiyihii ka socday Kaxda oo sanad iyo barkii ay jirtay dowladda ku jirtay liiska degmadii 17aad ee Gobolka Banaadir.
Mid ka mid ah waxgaradka deegaanka ayaa u xaqiijiyay Jowhar.com in Gudoomiye Muungaab uu u cadeeyay Gudoomiyaha Kaxda in dowladda isaga soo magacawday aanay aqoonsaneyn Kaxda, sidaas darteed Gobolka Banaadir ay ka kooban yihiin 16-degmo.
Labadii shir ee u dambeeyay ee Gudoomiye Muungaab la qaatay ayaa waxaa ka soo muuqday Gudoomiyeyaasha 16 ka degmo ee Gobolka Banaadir.
Inkastoo aanay jirin war si cad ah dowladda uga soo baxay oo ay ku diiday Kaxda, hadana marka loo fiiriyo go'aankan bilowga ah, waxay saameyn doontaa deegaano badan oo Madaxweynihii hore ee Sheekh Shariif degmo ka dhigay.
Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Madaxweynaha Soomaaliya uu doonayo in dhamaan uu laalo deegaanadii degmooyinka laga dhigay, isagoo u cuskanaya Dastuurka waxa u qorayo oo la sheegay in wixii ka dambeeyay 1991-dii wixii la magacaabay ama hanti dowladda laheyd cid kale lagu wareejiyay, xukumo ay riday dowladihii KMG ay dhamaan yihiin kuwo aan sharci aheyn.
Beesha degta Kaxda ayaa waday kulamo iyo shirar ay ka laheyd go'aankan loogu diiday in degmo loo aqoonsado, waxaana jirin ilaa iyo hada wax war ah oo ka soo baxan Beesha, iyadoo arrintan aad looga hadal haayo magaalada.
0 Comments · 5910 Reads
Jowhar.com742,455 unique visits